Endless OS inowedzera rutsigiro rweFlatpak Apps nekutadza | Linux Vakapindwa muropa
Endless OS inowedzera rutsigiro rweFlatpak Apps nekutadza
Isingaperi OS Iyo yakasimba uye yakapusa inoshanda sisitimu iyo inofambisa kushandiswa kwetekinoroji kune vashandisi vayo uye inounza ruzivo kwese kwese. Kugoverwa kweLinux ine akateedzana ezvinyorwa zvakatangirwa kare, zvinopfuura zana zana iyo yatinogona kuverenga nekutadza mukugovera uku.
Kugovera Iyo ine maviri maBhaibheri: Lite uye Yakazara. Yekutanga inokurudzirwa kune avo vanogara vachipinda muInternet uye inogona kuitwa nezvishandiso zvinopihwa chero nguva uye kune rimwe divi iro Rizere rinova reavo vasina Indaneti uye izvi zvinosanganisira mapakeji ese anopa hurongwa.
Uye kwete izvo chete, ikozvino iyo Endless yekuvandudza timu yakazivisa nguva pfupi yadarika kubva kuTwitter iyo Endless OS yakave yekutanga GNU / Linux kugovera kugonesa rutsigiro rweflatpak kunyorera nekutadza.
Kunyangwe kubatwa kwepapaketi pakapaketi hachisi chinhu chitsva, chokwadi ndechekuti yaive yakafambira mberi, nekuti zvakadaro kumwe kugovera hakuna kuenda kune izvo Endless akatsunga kuita.
Zvichida nekuda kwehurongwa hwakasimba nyaya kana nekuti haisi mukati mezvirongwa zvevanogadzira mamwe maLinux masisitimu, Asingaperi achatsvaga kunatsiridza sisitimu neichi.
Iwo mafomu ayo Endless anowedzera kuburikidza nerutsigiro rweFlatpak lsezvo isu tichigona kuwana kubva kuFlathub software repository iyo inotibvumidza isu kufamba nevashandisi nenzira yakapusa kutsvaga kwekushandisa uye zvakare kupa mukana kune vanogadzira kuti vawedzere yavo flatpaks.
Nenzira iyi Kubva pane vhezheni 3.2.5 yeEkusingaperi isu tinogona kutarisira kutsigirwa kweFlatpak mapakeji muhurongwa.
Pasina zvimwe nenzira yayo, ini ndinogona kungotaura kuti kumwe kugovera kunotora tsvimbo dzakafanana uye kujoina iyi pfungwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Endless OS inowedzera rutsigiro rweFlatpak Apps nekutadza
Chinyorwa chakanaka, chakarurama «solidity» = solidity. Kana shanduko ku "kugadzikana."
CAINE 9.0 inowanikwa kurodha pasi uye kumisikidza
Fomati dhiraivhi rakaomarara kana US padanho repasi